Amehlo agulayo emntwaneni 2, eminyakeni emithathu. Ukwelapha. Kungani amehlo abantwana enomuncu? Yini okufanele ngiyenze?
Ikhaya nomndeni, Izingane
Yikuphi okuhlangenwe nakho okukuphela okungafihli abazali kubazali abasanda kuzalwa. Eziningi zazo zingenangqondo, kuyilapho abanye, ngokuphambene nalokho, badinga ukunakwa. Inkinga evame kakhulu ebangela ukuba omama nabazali babuze imibuzo eminingi lapho amehlo omntwana ephenduka umuncu. Lo mbuso udinga indlela ekhethekile. Mayelana nalokho okufanele ukwenze kubazali, uma amehlo omntwana ewuncu, sizokhuluma kulesi sihloko.
Izimpawu zamehlo omuncu enganeni
Abazali abaningi bathola inkinga ekuseni. Ngesikhathi umntwana esalele, ngoba ubusuku obusweni bakhe kunezinqubo eziningi ezizongena kulezi zimpawu ekuseni.
Ingane ayikwazi (ngokubunzima) ukuvula amehlo ngoba izinkophe zakhe zihlangene ndawonye;
Ngemuva kokugeza i-mucus ibonakala futhi emva kwesikhashana;
Ingane esanda kuzalwa ishaqeka njalo, ilele kakhulu futhi ikhale;
I-Mucus ingaba nemibala ehlukene - evela emhlophe futhi ekhanyayo ephuzi ukuze ibonakale inombala obomvu nensundu (pus);
Izingane ezindala zikhononda ngokuzwa okungajabulisi emehlweni;
Ingane ishaya amehlo, izama ukuqeda i-mucus eyakhiwe;
Ngemuva kokugeza amehlo, i-mucus iyanyamalala, kodwa ukunganaki akupheli.
Ngaphambi kokuqala ukwelashwa, kubalulekile ukuqaphela imbangela eyinhloko yalesi simo - iso elibuhlungu kwengane. Sizokhuluma ngokubonakaliswa ngalunye kwalesi sibonakaliso ngokwehlukana bese sinika abazali iseluleko kanye nezincomo eziwusizo.
Lokhu mhlawumbe isizathu esivame kakhulu esenza lesi simo siphume. Kukhona isifo, ngokuvamile esencane. Ngakho-ke, lapho ebuzwa ukuthi kungani amehlo omntwana ehlabayo (iminyaka emibili), angaphendulwa ukuthi lokhu kuhlangene.
Uma amagciwane nama-bacteria efika ku-mucosa ye-eye, inqubo yokuvuvukala iqala, okuthiwa "i-conjunctivitis acute."
Ngokuvamile lesi sifo sithinta amehlo amabili ngesikhathi esisodwa, kodwa kunamacala lapho kuphela okukodwa okuvuthayo. Kulesi simo, izitho zombili kumele zithole ukwelashwa, ngoba emva kwesikhathi isikhanjethi singakwazi ukuhamba kahle. Kumele kuqashelwe ukuthi lesi sifo singakhula ngokungalingani, sithinta iso elilodwa kuneyesibili.
Izimbangela zezifo zingaba khona kwamagciwane nama-bacteria emzimbeni wengane, uthola uthuli nokungcola, ukusabela okweqile, njll. Uma amehlo omntwana ephenduka obomvu, amajwabu amehlo avule futhi avule, ukukhishwa kwe-purulent, ukushisa, ukucheka, iphethini ye-sclera iba yinto ehlukile, Ukwamukela amajwabu amehlo, ngakho-ke kulokhu kungenzeka ukuthi ukhulume ngokuzethemba mayelana nokuba khona kwe-conjunctivitis.
Uma isikhathi sokusebenzisa ukwelashwa, khona-ke imiphumela emibi ingagwenywa (okusho ukusabalala kwesibindi kwezinye izindawo zeso).
Lesi sifo asivamile, kepha kungaba impendulo kumbuzo wokuthi kungani amehlo enomntwana emuncu.
I-symptomatology ye-dacryocystitis ifana ne-conjunctivitis, kodwa izimbangela zokuqala zihluke kakhulu. Ngakho-ke, lesi sifo siqala ngenxa yokuvinjelwa kwengane yezinyembezi ngenxa yokutholakala kuzo izinsalela zezicubu zamabrionic. Lezi zinsalela zivusa ukubukeka kwesikhala, okuyisizathu esiyinhloko sokuvimbela ukuhamba kwezinyembezi zomntwana.
Isivikeli somlingo oyinhloko (izinyembezi) asisakwazi ukwenza umsebenzi wawo. Ngokumelene nalesi sizinda, amabhaktheriya angene egazini leso futhi amabhaktheriya aphindwe ngokushesha. I-Dacryocystitis kufanele ilashwe kuphela udokotela. Uzobeka ucwaningo olunembile futhi anikeze ukwelashwa okufanele.
Uma amehlo omntwana ewuncu, ukwelashwa kufanele kube ngesikhathi. Ngokwehlobo olunezilwane lwe-conjunctivitis, udokotela uzobeka ama-antihistamine, esimweni segciwane, amaconsi noma amafutha okuqukethe i-antiseptic, uma kwenzeka ama-bacterial, ama-ointment kanye namaconsi okulwa namagciwane. Kuzo zonke izinhlobo zesifo, imishanguzo efanelekile: Vitabakt, Albucid, Levomycetin, Tobrex.
Uma imbangela yamehlo omuncu i-dakriosistitis, bese kulesi simo, sebenzisa ukuhlanza kwe-decoctions yamakhambi, izindlela zokuvimbela umzimba, ukusikhipha umzimba. Ezimweni eziningi ezinganakekelwa, ukukhala nge-tear traction.
Kanye nemithi yokwelashwa, izindlela ezizimele zokwelapha zingasetshenziswa. Ngakho-ke, uma amehlo omntwana ephuzile, yini okufanele ayenze kulokhu? Ukugeza okuphumelelayo kubhekwa njenge-decoction ye-chamomile ne-calendula. A isipuni kwanoma imuphi umkhiqizo ithululelwa nge ingilazi yamanzi abilayo, wagcizelela isigamu sehora, ehlungiwe. Umhluzi ofudumele usetshenziselwa ukubhoboza futhi amehlo ahlanzwa. Kumele kuqashelwe ukuthi ama-tampons adinga ukuguqulwa kweso ngalinye. Kuyadingeka ukuba ususe emaphethelweni angaphandle angakapheli, ukuze ungatheleleki izingxenye ezinempilo zesitho sombono. Le nqubo yenziwa njalo amahora amabili.
Akuyona into ebonakalayo embi futhi ithayi elimnyama elibiziwe. Ufake ngaphakathi kuwo isitibiti esinyumba, ungakwazi ukugeza amehlo wengane 3-4 izikhathi ngosuku.
Indlela ephumelela kakhulu yokuphatha amehlo omuncu ihlala igeza kanye nesisombululo se-furacilin. Ithebulethi eyodwa kufanele ichitheke engilazini yamanzi abilayo. Khona-ke uketshezi kufanele kuhlungwe bese kufudumala ngokugubha amehlo izikhathi ezingu-3 ngosuku nge-swabs oyinyumba.
Kumele kuqashelwe ukuthi lezi zindlela akuzona ukwelashwa okuyinhloko yenkinga uma kwenzeka amehlo ebuhlungu emntwaneni, kodwa nje kuphela njengokwengezwa kumuthi wokwelashwa.
Okudingayo ukwazi uma amehlo omntanakho emuncu
Ngemuva kokubuka kwamehlo, ungaphumi. Lokhu kungabangela imiphumela embi. Kufanele kukhunjulwe ukuthi ngaphambi kokuba uthinte ingane, kufanele ugeze izandla zakho ngokugcwele.
Uma ilungu lomndeni linomkhuhlane, kungcono ukungavumeli ingane isikhashana. Umama ugula - ngalesi simo amabhande asegayini agqoke.
Unganaki ukuhlanzeka komuntu siqu. Kusukela usemncane, kufanele ufundise ingane yakho ukuthi igeze izandla zayo ngesepha namanzi. Okuningi kuxhomeke ekuhleleni ekamelweni. Ekamelweni lapho ingane ilele khona, kufanele uhlale uhlanza imanzi.
Uma amehlo wengane enomuncu (iminyaka emithathu), ke phakathi nalesi sikhathi kungcono ukungavumeli izilwane ezifuyiwe ukuba zifinyelele kuso. Ikakhulukazi uma kwenzeka ukuzwa okwejwayelekile.
Idayini yokulala kumele ishintshwe nsuku zonke. Geza kufanele kube ku-powder okhethekile yezingane ezingenayo izingxenye zamakhemikhali kanye ne-allergenic. Okufanayo kusebenza nezingubo namathawula. Kumele zikhonjiswe ezihlotsheni zemvelo. Ngesikhathi ukwelashwa, izingubo zangaphansi zengane kufanele futhi zishintshwe nsuku zonke.
Kunoma yikuphi, uma ingane yakho ithinte inkinga ye-eye sill, ungangabazi, kufanele uthintane nodokotela ngokushesha. Udokotela uzothola imbangela enkulu yalesi simo futhi anikeze ukwelashwa okufanele. Kumele kuqashelwe ukuthi ukuzithokozisa akunconywa, ngaphandle kwalokho isifo singase singene kwifomu elingapheli.
Indlela Yokuhlela Ukuzilibazisa Kwezingane Ngesikhathi Sokushisa Kwehlobo
Ukuzijabulisa kuqala ekamu lasehlobo - kuyathakazelisa futhi kuyasiza
I-"Meries" i-diapers: ingane yakho ifaneleke kakhulu!
Izihloko zomhlangano wabazali enkulisa: imibuzo ejabulisayo kakhulu
Ngingakanani iminyaka engingayinika ingane esikoleni? Ngabe ingane ikulungele esikoleni?
Ngasiphi yobudala ingane anganikeza amaqanda, indlela ukwethula ukudla okuqinile?
Izibalo Agricultural ekuqa- XVIII-XVIIII eminyaka
Spring sishaye izihlahla zezithelo kanye nezihlahla. Indlela fafaza izihlahla entwasahlobo
Indlela yokusula umlando wakho e-Opera, i-Google Chrome, "Yandex Isiphequluli"
Aroni Remsi: a mdlali ethembisa London "Arsenal"
Russian art iminyuziyamu futhi ukubaluleka kwabo empilweni yamasiko
1992 - unyaka isilwane ngesikhathi sokuzalwa komuntu empumalanga?
Uba kanjani eduze ngokwengeziwe: Iseluleko esiwusizo, umzimba kanye nokubuyekeza
Njengoba kusukela DC ukwenza izinguquko? Yikuphi kuyingozi ukwedlula wamanje - njalo noma variable?
Amaqiniso ethakazelisayo Canada. Izimpawu Canada. Nature Canada